Indray Mitopy Maso An’ny Repoblika Dominikanina | Diary 2015
Ilay tany Ny roa ampahatelon’ilay nosy hoe Hispaniola no misy ny Repoblika Dominikanina. Misy an’i Haïti kosa ny ampahatelony. Hita any daholo na ala mikitroka, na tendrombohitra mijoalajoala, na heniheny, ary na ny tany efitra aza. I Pico Duarte no tendrombohitra avo indrindra any, satria mahatratra 3 175 metatra ambonin’ny haabon’ny ranomasina. Torapasika fotsy no mandravaka ny ankamaroan’ny morontsiraka. Ahitana lohasaha lonaka kosa ao afovoan-tany, ka anisan’izany ny Lohasahan’i Cibao.
Mponina Metisy eoropeanina sy afrikanina ny ankamaroan’ny mponina. Misy olona avy any amin’ny firenena isan-karazany koa any, fa ny avy any Haïti no betsaka indrindra.
Fiteny Teny espaniola no fiteny ofisialy.
Rahalahy sy anabavy faly manao fiarahana
Fivelomana Ny harena an-kibon’ny tany, siramamy, kafe, ary sigara no tena fidiram-bolan’ny olona hatramin’izay. Nampandroso ny toe-karena koa tato ho ato ny fizahan-tany sy ny orinasa isan-karazany.
Toetany Antonony ny hafanana, satria 25 degre eo ho eo amin’ny ankapobeny. Be orana ny faritra be tendrombohitra any avaratratsinanana, fa zara raha misy orana kosa ny faritra maina. Misy rivo-doza tsindraindray koa any.
Kolontsaina Anisan’ny foto-tsakafon’ny mponina ny vary, tsaramaso, ary legioma. Be mpitia koa ny hazandranomasina, voankazo, poavrao, ary akondrolahy endasina. Ahitana ny sasany amin’ireo ilay sakafo tena ankafizin’ny olona antsoina hoe La Bandera Dominicana (na sainam-pirenen’ny Dominikanina). Mpankafy baolina kitra sy mozika ny olona any, ary tia mandihy, indrindra fa ilay dihy hoe merengey. Maro koa no tia milalao gitara, amponga, sodina, ary ilay zavamaneno atao hoe marimba.
MPITORY TAMIN’NY 2014
MPANATRIKA FAHATSIAROVANA TAMIN’NY 2014